Soa azo avy amin'ny mpikambana ao amin'ny tamba-jotra FIDULINK manerantany
HAFATRA NY RANO FOTOTIE
SOROHY IREO NY FOTONDRANA
NY FIVAVAHANA MISY FAHADIJANA ANAO
Mandritra ny 10 taona mahery FIDULINK manamboatra tamba-jotra iraisam-pirenena eo amin'izao tontolo izao mba hanolorany ny mpikambana ao aminy fomba hafa amin'ny raharaham-barotra manerantany. FIDULINK manolotra ny mpikambana ao aminy tambajotram-barotra sy vahaolana tena izy hanokafana ny orinasan'izy ireo amin'izao tontolo izao ary hahafahany manana mpanjifa iraisampirenena nefa koa nanangana ny orinasan'izy ireo amin'ny faritany rehetra eto an-tany.
Tambajotram-barotra tsy manam-paharoa misy any amin'ny firenena 90 manerana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny masoivohony, mpanolo-tsaina azy, mpiara-miombon'antoka, ivon-toeran-asa ary mpikambana iraisam-pirenena hafa ... FIDULINK manokatra ny varavaran'ny orinasa mpiara-miasa hampahafantatra anao ireo mpandahateny mahay indrindra eto an-tany sy ireo manolotra tombony manokana anao.
Ny tambajotra FIDULINK dia natsangana tamin'ny tanjona ny hanolotra ny mpikambana ao aminy hifandray amin'ireo mpanolo-tsaina mpiasan'ny mpiara-miasa manerantany amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana tsotra eo amin'ny lampihazo FIDULINK
NY FISOROAN’NY FIVORIANAANA INDRINDRA
FIVORIANA EQUIPPED INDRINDRA 56
Ny biraon'ny FIDU misy anaoLINK ary ny serivisy tsy mandao anao mihitsy, miaraka aminao hatrany dia mamela anao hijanona amin'ny fifandraisana tonga lafatra amin'ny ivon-toeram-piasanao.
Ivon-toeram-pivarotana FIDU anaoLINK dia eo am-pelatananao ny zavatra ilainao rehetra sy ny fandraisana fonosana hafa, ny fandraisana taratasy sy ny paositra, fiverenan'ny mailaka, ny fiverenan'ny parsela, ny fandefasana mailaka, ny valin'ny mailaka, ... Ivotoerana fandraharahana an-tserasera marina ny boaty mailakao izao ao amin'ny smartphone na solo-sainao.
SORATORA HO AN-TOKONY ALOHA
Ny tambajotram-barotra iraisam-pirenena momba ahy
Ny tamba-jotra FIDULINK apetrakao amin'ny fahazoan-davitra nomerika ny fifandraisan'ny mpikambana sy ny mpiara-miasa aminy FIDULINK. Tambajotra mora ampiasaina miaraka amin'ny fisoratana anarana maimaim-poana ary tsy misy fepetra misokatra ho an'ny rehetra.
Ary koa ny sehatry ny hetsika sy ny matihanina maherin'ny 1000 any amin'ny firenena 90 manerantany. Mpikambana sy mpiara-miasa FIDULINK miasa ny rehetra amin'ny lalana iray ihany mba hanolotra sy handray soa avy amin'ny tsara indrindra amin'ny tsirairay sy ny tombony azo.